Tababare Sarri oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha Juventus ee wajahaya kulanka caawa ee Genoa …. (Miyuu qeyb ka yahay Cristiano Ronaldo?) – Gool FM
Tababare Sarri oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha Juventus ee wajahaya kulanka caawa ee Genoa …. (Miyuu qeyb ka yahay Cristiano Ronaldo?)
(Turin) 30 Okt 2019. Tababare Maurizio Sarri ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha kooxda Juventus uu ku wajihi doono kulanka ay caawa kula ciyaari doonaan naadiga Genoa horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Xiddiga reer Brazil ee Douglas Costa ayaa liiskan dib ugu soo laabtay sababa la xiriira dhaawac uu kaga maqnaa kooxda Juventus, si la mid ah xiddiga reer Weles ee Aaron Ramsey ayaa isna liiskan ku soo baxay, si ay qeyb kaga noqdaan kulanka horyaalka Serie A ay caawa kula ciyaari doonaan kooxda Genoa.
Laakiin warka ugu xun ayaa wuxuu yahay in liiska xiddigaha kooxda Juventus ee uu ku dhawaaqay tababare Maurizio Sarri uusan ku soo bixin xiddiga reer Bosnia ee Miralem Pjanić.
Haddaba halka hoose kaga boggo liiska xiddigaha uu tababare Sarri ugu yeeray kulanka horyaalka Serie ay caawa kula ciyaari doonaan kooxda Genoa: